musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Zvishongo zvitsva zveLuxury uye Watch Brand SABOTEUR Inotanga
Zvishongo zvitsva uye label yewachi SABOTEUR inosheedzera kuvhurwa kwayo pasi rose online, kuunza chitoro chepasi rose chewebhu pa saboteur.world. Yakarongwa kuvhura zvitoro zvayo zvekutanga zvakatsaurirwa mukota yekutanga ye2022.
SABOTEUR ndiko kutanga kwedzinza idzva. Pfungwa iyi yakabuda kubva munhaurirano dzepedyo pakati pevatangi Thomas Sabo nemwanakomana Santiago Sabo. Muimbi uye mukadzi waThomas Sabo, Rita Sabo, anotarisira maitiro ekugadzira uye dhizaini yemhando.
PaSABOTEUR, zvekunamata zvinotora chikamu chepakati chekubatanidza kusanzwisisika uye geometry, zvichibva pane yemashiripiti nguva yealchemy. Maumbirwo ezvishongo zveSABOTEUR akashinga, dhizaini yayo idiki, uye nyowani mukusvika kwayo kumuviri. Chigadzirwa chacho chine mitsetse miviri yechigadzirwa, Elemental uye Sacra, iyo inosanganisira yakasimba yekubatanidza cheni, maumbirwo ejometri, uye inoteerera kumashure kune yakadzokororwa zviratidzo zvisingaperi. Chimwe chezvimedu zvakakosha iSacred Planet, pendant kutiyeuchidza nezvekukosheswa kwenyika yedu pachedu nenzvimbo dzinofanirwa kuve kwatiri.
Pamusoro pehuzivi hwehungwaru uye hwekuchengetedza zviwanikwa, iyo mhando inotarisa pakushandiswa kwezvinhu zveprimiyamu, hunyanzvi husingaite uye mhando yepamusoro. Zvishongo zvinogadzirwa ne925 Sterling sirivheri, 18k yero uye chena goridhe, yakasarudzika zvicherwa uye chena uye nhema Fairtrade madhaimondi. Iwo mawachi mune ese ari maviri akaunganidzwa akagadzirwa nehunyanzvi hweSwitzerland. SABOTEUR ine chinangwa chekugadzira zvishongo zvakagadzirirwa nekusingaperi, uye anotenda kuti kupfuudza zvishongo zvinodikanwa uye zvinopfekwa kuzvizvarwa zvinotevera chikamu chehupenyu hunoziva.